बग्न नसकेको बागमती - Seto Parda
Digital Film Patrika
माला पछी सयपत्री
रेखाको ‘राम’ अवतार
प्रचार शैली फेर्दै दिनेश डिसी
रामबाबुको ‘पुरानो डुंगा’ मा दया–प्रियंका
हिन्दी फिल्ममा रेश मरहठ्ठा
योरुनाका पक्षमा नायिकाले बाले मैनबत्ती
Justice For Neha Pun
Nischal Basnet Interview
Aryan Sigdel & Namrata Shrestha Interview
Pradip & Puja Gossip
स्वयं रेखा नै मेरो प्रतिष्पर्धी हो : रेखा थापा
माया कुनैपनि समयमा, कुनै पनि बखतमा : अनुप–दिया
कफी खाएर बिहे गरेको हुँ : खगेन्द्र लामिछाने
नाटक लिएर आउँदै ‘पशुपतिप्रसाद’
सर्वनाममा ‘मान्छे पोल्ने भट्टी’
दयाको अस्वस्थताले ‘…र माइलो’ स्थगीत
फिल्म समीक्षा: सामान्य पात्रको असामान्य लक्ष्य
फिल्म समीक्षा: जीवनले धानेको फिल्म
बिना घुम्तीको ‘फन्को’
बग्न नसकेको बागमती
फिल्म समीक्षा : कबड्डी कबड्डी
5 years ago setoparda
समग्रमा ‘बागमती’ राजेश हमालका फ्यानका लागि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ मात्रै हुन सक्नेछ । बेतूकका स्क्रिप्टवाला फिल्म खेलेको आरोप खेप्दै आएका राजेशका लागि ‘बागमती’ पछि पनि आरोप लाग्न सक्छ, ‘अब नेपाली फिल्म उद्योग पहिलो जस्तो परम्परागत रहेन । तर राजेश अझै उही राजेश नै छन् । परिवर्तन हुने कहिले ?
फिल्म : बागमती
निर्देशक : सन्नी केरला
कलाकारहरु : राजेश हमाल, शिव श्रेष्ठ, केकी अधिकारी, मुकुन्द श्रेष्ठ, ध्रुव कोइराला, कन्चन ठकुरी, रविकरप्रसाद घिमिरे
नेपाल पहिलेको नेपाल रहेन, त्यो मलाई थाहा छ । तर राजेश अझ त्यही राजेश हो । राजेश हमालको उक्त संवादसँगैको प्रोमो प्रस्तुतीकरणले ‘बागमती’ वजनदार हुनसक्ने संकेत दिएको थियो । दक्षिण भारतीय प्रविधि र प्राविधिकको टोलीलाई ल्याएर राजेश हमालको ‘कमब्याक’ गराउन खोजेका निर्देशक सन्नीको काम हेरिसकेपछि राजेश अझ त्यही राजेश नै रहेछन् भन्न कर लाग्छ । ठूलो हल्लीखल्लीबीच ल्याइएको ‘बागमती’ मा राजेशका फ्यान निराश बन्न सक्छन् । राजेश प्रोमोमा जति उचाई लिएका छन्, पौने दुई घन्टाको फिल्ममा बढाउन सकेका छैनन् ।
‘बागमती’ मुख्यत: बाबुछोरीको कथा हो । मुटु रोगी छोरीको उपचारमा १६ लाख रुपैया जुटाउनका लागि भौतारिएको बाबुलाई आईपर्ने र गर्ने गलत कामको फेहरिस्त हो, फिल्म । जसमा बाबुको भुमिकामा देखिएका नयाँ कलाकार रविकरप्रसादको अभिनय फितलो लाग्छ । तुलनात्मक रुपमा छोरी कन्चन शसक्त छिन् । फिल्मको विषयबस्तु र प्रचारात्मक सामाग्रीबीच तालमेल देखिदैन । शिव श्रेष्ठ शुरुवातमा एक द्वन्द्व दृश्यमा देखिन्छन् र म्याजिक आउट शैलीमा हराउँछन् ।
त्यसो त बाबुछोरीको कथामा राजेश पनि अटाउन सकेका छैनन् । फिल्मले राजेशको स्टाइल र संवादमा जति मिहिनेत गरेको छ, चरित्र स्थापित गर्न दु:ख गरेको देखिदैन । दुई वर्ष मानसिक अस्पताल भर्ना भएको आफ्नै पत्निको हत्या गर्ने साइको भनिएका राजेश भिलेन हुन् वा हिरो हुन् ? मुख्य कलाकार हुन् वा सहायक हुन् ? ‘बागमती’ मौन बस्छ । दर्शक रनभुल्लमा पर्न सक्छन् । त्यसो त फिल्मले अझै बाँकी छ भनेर कथालाई सिक्वेलसम्मका लागी धेकेलेर पन्छिने बठ्याई पनि गरेको छ ।
‘बागमती’ कथा, प्रस्तुती र अभिनयमा कमजोर भएपनि प्राविधिक पक्षमा भने केही सबल देखिन्छ । छायांकन, पृष्ठभुमि संगीतले फिल्मको स्तरलाई उकास्ने काम गर्छन् । एक्सनको कोरियोग्राफीले फाइट मन पराउने दर्शकका लागि स्वादिलो लाग्न सक्छ । तर जति एक्सन फिल्म भनिएको हो, त्यस मात्रामा फिल्मले द्वन्द्व पस्कन भने सकेको छैन । फिल्मको सबैभन्दा चुकेको पक्ष थ्रीललाई तार्किक बनाउन नसक्नु हो । दिनदहाडै प्रहरी मारेर भागेको अपराधीमा डरको भाव नदेखिनु र प्रहरीकै सामुन्नेबाट अपराधी ओहोरदोहोर गरिरहनुले परिस्थितीको उपहास गरेको छ । राजेश आफैं ‘मान्छे जति त्रसित हुन्छन, म उती रोमान्चित हुन्छु’ भन्छ । तर न उसित मान्छे त्रसित नै हुनुपर्ने पर्याप्त कारण फिल्मले छोड्न सकेको छ, न त ऊ रोमान्चित बन्नका लागि त्यस्ता हर्कत नै गर्छ । बरु फिल्म पछिल्लो समय विषयान्तर हुँदै बागमती नदीको परिभाषासम्म पुग्छ ।
Tags: Bagmati Keki Adhikari Rajesh Hamal Shiva Shrestha
Previous ‘फन्को’ ले त्यो समय सम्झाउँछ : दयाहाङ
Next नक्कली केपीको (धुर्मुस) ग्यास ब्यङ्गय (भिडियो)
वर्षा सिवाकोटीलाई ‘हेप्नी’ काे ?
3 months ago setoparda
मिलन चाम्सले नचाँए दयाहाङ राई र रेबिकालाइ
प्रताप र एन्जिलाको ‘प्रेमिका’मा बद्री बिस्ट र रियाषा दाहाल (भिडियो )
Tweets by @setoparda
तपाईले छुटाउनु नहुने
प्रभाव जमाउन नसक्ने कमजोर भाइरस ‘सेन्टी भाइरस’ समीक्षा
1 year ago setoparda
खुम्चिएकाे क्यानभासमा फराकिलाे दृश्य चलचित्र ‘आमा’ समीक्षा
धर्मराएको कथावाचन शैलीमा जोकरको कलेवर
चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ सिक्वेल चलचित्रकाे सफल अवतरण र कमेडीकाे एक बुलन्द स्तम्भ ( समीक्षा)
2 years ago setoparda
सेतो पर्दा भिडियो रिर्पोट
11 months ago setoparda
अनलाईन महफिल (लाईभ)
12 months ago setoparda
‘‘सेल्फी किङ’ हेरेर ग्वाँ ग्वाँ राेएँ’, कर्म (भिडियाे)
कानुनले एक अपराध छुट दिए बलात्कारीलाई मारिदिन्थे दिपेन्द्र के खनाल
सुमित खड्काको ‘ म कदापी चाहन्न ’ सार्वजनिक (भिडियो) ﻿
निशान भट्टराई र रचना रिमालको नँया गीत “जिन्दगीको आभास”
शिव परियारको गीत ‘तिम्रो याद भुलाउन’ सार्वजनिक
म्युजिक भिडीयो ‘म छु बिदेशमा’ सार्वजनिक
‘सुनन’मा आकाश र उषाको प्रेम
ट्रेन्डिङमा गायक राज खम्बुको ‘मुना’
Covid-19 dayahang rai Gaatho Mandala Theatre Music Nazir Husen Rajesh Hamal Sarwanam Theatre saugat malla Theatre अक्षय कुमार अनमाेल के.सी. कबड्डी कबड्डी कबड्डी कविता काेराेना भाइरस गजल जात्रै जात्रा दयाहाङ राई धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशन नम्रता श्रेष्ठ नाजिर हुसेन नेपाल अन्तर्राष्ट्रय नाटक महाेत्सव पल शाह पुष्प खड्का प्रकाश सपुत प्रियंका कार्की बुलबुल महफिल मेलिना राई यात्रा रामबाबु गुरूङ वर्षा राउत विपिन कार्की शनिबारकाे सेताेपर्दा शिल्पा मास्के सर्वनाम सलमान खान साँइली साहाे साैगात मल्ल सुरक्षा पन्त सृष्टि श्रेष्ठ स्वस्तिमा खड्का हरिवंश अाचार्य हामी कवि र कविता